Ao anatin’ny tontolon’ny bilaogy Japoney (2005) · Global Voices teny Malagasy
Ao anatin'ny tontolon'ny bilaogy Japoney (2005)
Voadika ny 06 Novambra 2018 11:50 GMT
Afaka manome tantara saika ara-potoana momba ny horohorontany vao haingana tao avaratr'i Japana ny bilaogera Japoney.
Hoy ny bilaogera Japoney iray:
The fridge door swung upon, the goldfish bowl fell off the shelf, and it was just a terrible situation inside the house…There have been a lot of earthquakes here in recent years, which makes me a little worried. And it shook for such a long time…
Nihozongozona ny varavarankelin'ny vata fampangatsiahana, nianjera ny baolina trondrogasy, ary zava-mahatsiravina tao an-trano izany… Nisy horohoron-tany maro teto anatin'izay taona vitsy izay, ka mahatonga ahy somary miahiahy. Ary nihozongozona nandritra ny fotoana lava be izany.
Mety hirotsaka ho kandidà ho an'ny Antokon'ny fitondrana Liberaly Demokraty amin'ny fifidianana manaraka ao amin'ny Antenimiera, izay hotontosaina amin'ny 11 Septambra i Takafumi Horie, 32 taona, filohan'ny Livedoor, izay manome fitaovana fibilaogina malaza indrindra ao Japana. Nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversiten'i Tokyo, mety hifanandrina amin'ilay olo-malaza Shizuka Kamei, olo-maventy teo aloha tao amin'ny LDP izay voaroaka vao haingana tao amin'ny antoko noho ny fanoherana ny fanavaozana momba ny paositra natolotry ny praiminisitra Junichiro Koizumi i Horie.
Ankoatra ny fanomezana lecteur DVD finday maimaim-poana ho an'ireo bilaogera vaovao (hatramin'ny 30 septambra ihany, ary misy famerana sasany!), nikarakara fifaninanana isam-bolana ho an'ireo bilaogy japoney roapolo malaza be indrindra ny Ameba Blog, manomboka 5000 yen (eo amin'ny 45 dolara Amerikana) hatramin'ny 100.000 yen (900 dolara) ny loka. Faritana arakaraka ny fitsidihana ny pejy ny lazan'ny bilaogy
Japan's Outrageous Asian Neighbours, nasongadina teo aloha tato amin'ny Global Voices, no nahazo ny 5000 yen teo amin'ny toerana faha-12. Bilaogy momba ny fiantsenana sy ny olo-malaza kosa no anisan'ireo nahazo 10.000 yen, raha nahazo 30.000 yen ny bilaogy natokana ho an'ny lalao flash sy lohahevitra hafa mahaliana.
Ny bilaogy voalohany ho an'ny volana Jolay dia nahazo 100.000 yen, ary ny lohateniny dia azo adika mifanakaiky hoe Trimobe ny vadiko! Ny bilaogy, izay manasongadina sariitatra, dia manoratra ny fiainana feno fijaliana iainan'ny bilaogera miaraka amin'ny vadiny. Mampihomehy ny feo, ary nanelingelina ireo mpamakiny ny bilaogy satria nampifanarahana tamin'ny andian-tsarimiaina manga sy ny fandaharana amin'ny fahitalavitra ao amin'ny Fuji TV, tambajotra mifandray akaiky amin'i Livedoor.
Matetika toa hita miara-miasa ny Livedoor sy ny Cyberagent, orinasa mifanakaiky amin'ny Ameblog.
Misy ihany koa ny drafitra hamadika ny “Trimobe ny vadiko”‘ho sarimihetsika atsy ho atsy.
Tsy ilaina ny miteny tsy niandry ela ny Ameba Books, trano fanontan'ny Ameblog, hamoaka boky roa ho an'ny “Trimobe ny vadiko” izay samy azo vidiana ao amin'ny Amazon.